किन नेपाल सम्बतलाई मुख्य सम्वतको रूपमा अंगीकार नगर्ने ? – ABC KHABAR
किन नेपाल सम्बतलाई मुख्य सम्वतको रूपमा अंगीकार नगर्ने ?
April 13, 2016 ABC Khabar बिचार
नेपालमा विक्रम सम्बत चालु भएको भर्खर ११२ वर्ष पुगेको छ । यो भन्दा पहिले १३५ वर्षसम्म शक सम्बत र त्यो भन्दा पनि पहिले ८९० वर्षसम्म नेपाल संबत् लागु थियो । त्यसै बारेको इतिहास म यहाँ पर्गेल्दै छु ।
नेपाल सम्बत एउटा यस्तो सम्बत हो, जो नेपालको भूगोलमै सृजित भयो र कुनै एक व्यक्तिको नामबाट होइन कि राष्ट्रकै नामबाट निरन्तरित भइ आएको छ । इतिहास बोल्छ,
राजा राघवदेवको पालामा शंखध्वर भन्ने सामान्य व्यक्तिले इस्वी संम्वत ८७९ मा देशभरका ऋणहरू मोचन गरी यो सम्बत सुरु गरे । नेपाल खाल्डोभित्र यसले ८९० वर्षसम्म राजकीय सम्बतको रुपमा राज गर्यो । पृथ्वीनारायण शाहले इसं १७६९ मा नेपाल लिएपछि शक सम्बत चलाए र नेपाल सम्बतको राजकीय निरन्तरता टुट्न गयो तथापि यो सम्बत पछि पनि प्रतापसिंह शाहको समयमा तिब्बतसंगको सम्झौता गर्दा प्रयोग भएको देखिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको शक सम्बतको निरन्तरता इस्वी सम्वत १९०४ मा राजा त्रिभूवनको पालासम्म अर्थात १३५ वर्षसम्म कायम रह्यो । त्यसपछि विक्रम सम्बत शुरु भयो। विक्रम सम्वत् १९६१ बैशाख १ गतेदेखि सुरुवात भयो र नेपालमा हाल यसको राजकीय हैसियतको उमेर ११२ वर्ष पुगेको छ ।
भनिन्छ कि, शक सम्वत् र नेपाल सम्वत् दुवै तिथिको आधारमा मात्र चलिरहेको र तिथिहरूको स्थिति अगाडि वा पछाडि भइरहने हुँदा शासन व्यवस्थामा असजिलो हुन्थ्यो र सजिलो बनाउनको लागि चन्द्रशम्शेरले ज्योतिषीहरूको सल्लाह लिएर तिथि र बारहरूमा तलमाथि नगरी विक्रम सम्वत् १९६१ मेष संक्रान्ति वैशाख १ गतेदेखि नेपालमा चलाए ।
स्मरणीय यो छ कि तिथिको आधारमा चल्दै रहेका नेपाल सम्वत् र शक सम्बतमा जम्मा ३५४ दिनको एक वर्ष हुन्छ भने विक्रम सम्बतको वर्ष ३६५ दिन १५ घडी ३१ पला ३१ प्रतिपलामा पूरा हुन्छ । गणितीय हिसाब जे भएपनि यसमा चन्द्रसम्शेरको आफू सूर्यवंशी हुनुको गर्वलाई स्थापना गर्न यो सूर्यको गतिमा संचालित विक्रम सम्बत चलाएको हो भन्ने धेरै विद्वानहरूको मत छ । यहाँ नै म थप मत राख्छु कि विक्रम सम्बत हिन्दु राष्ट्रवादको गैरहिन्दु जातिमाथि विजयको प्रतिक स्वरूप भारतीय उपमहादिपमा परापूर्व कालदेखि प्रतिष्ठापित भै आएको र सोही हिन्दु राष्ट्रवादको निरन्तरतास्वरूप चन्द्रसम्शेरले हिमाली भेगका जनाजातिहरूमाथिको विजयको सानमा यो सम्बत चलाए ।
राजकीय सम्बत जुनै भएपनि नेपाल सम्बत चन्द्रमाको तिथि मितिसम्मत भएकै कारणले यसलाई जनताले चाड, पर्व, जन्म, मृत्यु आदि सबै संस्कारको तिथि गणना र चिना, धर्मपत्र, लेख, किताब, शीला, धातुपत्र आदिको मिति प्रयोगमा आफ्नै हिसाबले निरन्तरित गर्दै ल्याए । जुन आजसम्म पनि निरन्तरित छ । तर उल्लेख्य यो छ की विक्रम सम्बतलाई राजकीय सम्बत घोषणा गरेको १६ वर्षतिरै अर्थात् १९२० को दशकमा यसको विरोध साथ नेपाल सम्बतलाई राजकीय सम्बतको रूपमा स्थापना गर्ने अभियान नेपाल भाषाका अन्दोलनकर्ता बौद्ध विद्वान धर्मादित्य धर्माचार्यले कलकत्तामा बसेर सुरु गरे । त्यसपछि इस्वी संम्वत १९५० मा राणाशासनको अवसानपछि यसलाई भाषा, साहित्य र संस्कृतिकर्मीहरूले आन्दोलनको रूपमा अघि बढाए । पछि इस्वी संम्वत १९७९ मा नेपाल भाषा मंकाखलले यस अभियानलाई संगठित रूपमा अगाडि बढायो ।
तत्कालिन पंचायत सरकारले यस आन्दोलनलाई दबाउन शान्तिपूर्ण र्या्लिहरूमै धावा बोलेर अभियानकर्ताहरूलाई पिट्ने जेल हाल्ने समेत गर्यो । अन्तत पंचायाताकालको अवसानपछि इस्वी संम्वत १९९० मा यसका सँस्थापक शङ्खधरलाई विभूति मानेर राजकीय सम्मान दिइयो । अझ शाहकालको अवसान पछि सन् २००८ मा सरकारले नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय सम्बतको रूपमा घोषणा गर्यो र २०११ अक्टोबर २५ मा यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सिफारिसको लागि एउटा कार्यदल नै गठन गर्यो । तर त्यसले आजसम्म कुनै काम अघि बढाएन । तथापि २०१३ देखि नेपाल सम्बतको पहिलो दिनलाई नववर्षको रूपमा बिदा दिने चलन कायम भयो । विक्रम सम्बत वा शक सम्बत आयातित सम्बत मानिने हुँदा नेपालका माटोप्रेमीहरू नेपाल सम्बतलाई नै नेपाली गर्बको सम्बत मान्दछन् ।
आयातित मानिएको विक्रम सम्बतले राजकीय स्थान पाउँदा धेरै राष्ट्रबादी चिन्तकहरू नेपाल सम्बतलाई नै यस स्थानमा बिराजमान गराउन चाहन्छन् । विक्रम सम्बत आयातित भएपनि नेपाल सम्बतलाई स्थापित गर्नको लागि विदेशी बनाइ राख्न कत्ति जरुरी छैन भन्ने मेरो सोच छ । कैयौं आयातित मूल्य र मान्यता हामीहरूसँग यस्ता छन्, जो हामीसँग आफ्नै माटामा सिर्जित भएकाको तुलनामा बढी प्रचलित छन् जसको पोषण र प्रवर्द्धनमा हाम्रा उल्लेखनीय लगानी रही आएको छ । त्यसैले विक्रम सम्बतलाई यस माटो पनि लागानी भएकोले यथा कायम गर्दै नेपाल सम्बतलाई समरूपको उचाइमा स्थापना गर्न सक्छौं भन्ने मेरो मान्यता छ ।
विक्रम सम्बत आज भारतमा पर्ने मालवीका राजाले स्थापित गरेका र उनैको नामबाट यसलाई निरन्तरित गरिएको हुँदा बिदेशी सम्बत भनिने गरिएको हो । तर विवेचना योग्य यो छ कि जुनबेला यसको सुरुवात भयो त्यस बेला न नेपाल बनेको थियो न भारत । यी भूमिहरू हज्जारौँ जनपदमा बाँडिएका थिए र कहिले कुन, कहिले कुन, सयौं राज्यहरू अन्तर्गत यता र उता हज्जारौँ पटक परेका थिए । उत्तरमा मानसरोबरदेखि दक्षिण गंगानदीसम्म र पूर्वमा कामारुप ब्रह्मपूत्रदेखि पश्चिममा हिन्दुकुश पर्वतसम्म फैलिएका हिमबत खण्डका भूमिले अनेकन मूल्य र मान्यताहरू सिर्जना गरे । ती सबलाई शदियौँ लगाएर परिष्कार गरे । यी अबधिमा यस भूमिमा हज्जारौँ राज्यहरू स्थापित भए र नाशिए पनि । तर ती साँस्कृतिक निधिहरूको निरन्तरता तथा परिष्कार प्रक्रिया कहिल्यै रोकिएन ।
विक्रम सम्बतका संस्थापक विक्रमादित्य आजका नेपाली भूमिकै हुन् भन्ने धारणाहरू नेपालमा नभएको होइन । इतिहासले कुनै प्रमाण नदिए पनि अनेकन लोककथा र स्मारकहरूले यस कुराको पुष्टि गर्दछन् । जस्तै ः
भारतीय इतिहासमा एउटा होइन थुप्रै विक्रमादित्यहरू देखिन्छन् । अझ विक्रमादित्य कुनै एक राजाको नाम होइन कि, पराक्रमी राजाको पदवी भएको देखिन्छ । हिन्दुभन्दा इतरसंस्कृतिका बिदेशी आक्रमण र उनीहरूका स्थापनाका बिरुद्ध लड्ने, जित्ने र आफ्ना सँस्कृतिको संरक्षण गर्ने पराक्रमी राजाहरूलाई ‘विक्रमादित्य’ मानिने इतिहासले
जस्तैः पहिलो विक्रमादित्य मालवीका सातकर्णी (इशा पूर्व १०० देखि यशापूर्व ४४०) थिए । उनले आफूलाई विदेशी शकहरूलाई खेदी विक्रमादित्यको उपाधीले विभूषित गरे । यिनैले इशापूर्व ५७ सालमा नयाँ सम्बत सुरु गरे, जसलाई पछि विक्रम सम्बत भनियो । पछि पाँचौ शताब्दिमा चन्द्रगुप्त द्वितीय, आठौँ शताब्दीमा पुलकिशनको द्वितीय पुत्र, अनि उनैकानाति समेत एघारौँ कर्नाटकका त्रिभुवनमल्लले विक्रमादित्य उपाधि धारण गरेका देखिन्छन ।
ऊ बेला ससाना हज्जारौँ राज्यहरूमा बिभाजित हिन्दु राष्ट्रहरूका जनताले हिन्दु राष्ट्रबादका प्रतीक ‘विक्रमादित्य’ लाई साझा रुपमा आफ्ना आदर्श नायक बनाए । सबै हिन्दु राष्ट्रहरूले विक्रमादित्यका परम्परालाई आफ्ना बनाए । यसरी नै चालुक्य राजबंशको शासन भोग्ने पनौतिले पनि विक्रमादित्यलाई आफ्ना बनाए । नाला होस् वा साँखु होस् वा बत्तिसपुतलि होस् त्यहाँ उपलव्ध लोकआहानहरूले गरेका पनि त्यही हो ।
यसरी विक्रमादित्यहरू कुनै राजनीतिक भूगोलको सीमामा बाँधिएका थिएनन् । त्यसैले विक्रम सम्बत नेपालमा छोटै समयदेखि प्रचलनमा आएको भएपनि यो हामी नेपाली समेतको धरोहर रहेको नितान्त साझा सम्बत हो । हामी आफ्नै लोक दन्त्य परम्पलाई समेत नकार्न सक्दैनौं । त्यसैले नेपाल सम्बतलाई पूर्ण नेपाली बनाउन विक्रम सम्बतलाई भारतीय बनाइ राख्दा आफैलाई दुख्ने कुरो मलाइ लाग्दछ ।
तर कुरोको चुरो यो छ कि चन्द्रसमशेरले किन शक सम्बतलाई मासेर बिक्रम सम्बतलाई स्थापित गरे ? माथि भनिए झैँ शक सम्बतको प्रचलनमा तिथिमिति एक नाश नरहने हुँदा प्रशाशनिक कार्यमा सरलताको लागि सूर्यको गति अनुसारको स्थीर गते रहने विक्रम सम्बतको प्रचलन सुरु भएको भन्ने कारण कतिसम्म सही हुन सक्छ ? इस्वी सम्वतको तुलनामा बिक्रम सम्बतको गते कहाँ एक रुप रहेको छ र ? यो पनि त तल माथि परिरहेको छ । त्यसरी यो तलमाथि हुने तिथिको प्रयोगले फरकै के पार्छ ? हिन्दु सँस्कृतिका हरेक सँस्कार चन्द्रगतिकै तिथिमितिमै त कार्यान्वयन हुन्छ । प्रशासनिक कार्यमा यो प्रयोग गर्नै नमिल्ने के छ ? यो यता आएर राणा र शाह वंशका पक्षधर पण्डितहरूले यसको प्रतिष्ठालाई उचो बनाउन पर्गेलेका कारणहरू मलाई लाग्दछ ।
भारतीय इतिहासबाट बुझिन्छ विक्रम सम्बतको प्रतिस्थापनमा हिन्दु राष्ट्रबादिता स्पष्ट हाबी छ । चन्द्र समशेरमा आफू राजपूत हुनुको गर्व र हिन्दु राष्ट्रबादिताको ज्वर थियो ।शक सम्बत चल्दै थियो चन्द्र समशेरले पुरोहितहरूको बहकाउमा नेपाली भूमिमाथि राजपूतहरूको विजयको सान देखाउने हिसाबमा हिन्दु राष्ट्रबादिताको प्रतिक “विक्रम सम्बत“ लाई स्थापित गरे । सम्बत फेर्नै पर्ने कुनै अर्को ठोस कारण देखिन्न । उनमा नेपाली राष्ट्रबादिता नै थियो भने नेपाल सम्बतलाई फेरि प्रतिस्थापन गर्न सक्थे। तर उनको नजरमा नेपाल सम्बत एक विजित तुच्छ जातिका सामान्य जनताको छोरोबाट स्थापित भएको सम्बत थियो, यो उनलाई कदाचित स्वीकार्य थिएन ।
अन्तमा भन्नु छ विक्रम सम्बतलाइ हामीले यसै उसै व्यहोरेकै हो. पूर्णतस् किन नकार्नु पर्छ र ? यसलाई यथा उसैको ठाउँमा राखेर नेपाली इतिहासको स्वर्णिम कालमा ८९० वर्षसम्म राजकीय सम्बत रहेको नेपाली माटोको नेपाल सम्बतलाई प्रमूख सम्बतको रूपमा कायम गर्दा आफ्नै इतिहासको गौरवलाइ सम्मान पुगेको हुनेछ ।
टुहुरा मान्छेहरु आफन्तको खोजिमा